Zvikwereti zvekudzivirira mari yakaipa | Ehupfumi Zvemari
Zvikwereti zvekudzivirira mari yakaipa
Vashandi vemari vanowanzofanira kubvisa zvikamu zvavo kana mari yezvikwereti kuti vagadzirise matambudziko avo emari. Kana zvinzvimbo zvako mune izvi zvigadzirwa zviri mu capital inowana mamiriro inogona kumiririra yakanakisa mashandiro ekudzosera mari yakadyarwa uye zvido zvayo zvinoenderana. Asi dai zvaive zvakapesana, ndiko kuti ivo vari kurasikirwa nemari, dambudziko rakakomba raizogadzirwa iro raizogadziriswa chete kuburikidza ne bank loan inoitirwa kudyara. Kuzadzikisa kudiwa uku, mamwe mabhangi akaita akateedzana ezvikwereti anosangana neaya maitiro.
Kune vanoita mari vasingade kugadzirisa zvinzvimbo mumisika yemari, ivo vanongova nesarudzo yekuda chikwereti chemunhu. Nekudaro, zvichave zvakakodzera kuti uone kana chikumbiro chako chichava chakakosha. Kune kufarira kwavanoshandisa, pakati pe7% uye 10%, isu tinofanirwa kuwedzera makomisheni uye zvimwe zvinoshandiswa mukutarisira kwavo izvo zvinodiwa zvinogona kuvepo. Kusvika padanho rekumiririra 2% yemari inodiwa. Ichave nguva yekuongorora kana zvisiri izvo tengesa zvinzvimbo mune zvigadzirwa zvemari. Nekudaro, mamwe masisitimendi emari akaronga mutsetse wakasarudzika wechikwereti umo izvi zvinodiwa nevatengi zvinotarisirwa.
Kugadzirisa zviitiko izvi mumabhanga, mabhanga akagadzira mimwe mitsara yechikwereti ine izvi zvambotaurwa. Kubva kunzvimbo dzakasiyana vanoshandira zviitiko zvakasiyana mumusika wemasheya uye nemari yezvigadzirwa zvemhando dzakasiyana. Inogona kuve yakabatana nekutenga uye kutengeswa kwemasheya pamusika wekutengesa kusvika Investment funds kana kunyangwe mune imwewo nyaya kune ekuchengetedza kana epenjeni zvirongwa. Asi uchiziva nguva dzese kuti kudiwa kweimwe yeaya makiredhiti kunounza yakatarwa mari mwedzi wega wega. Iko chikamu chemubereko chinofanirwa kubhadharwa chinomira uye kune icho chinofanira kuwedzerwa makomisheni anogona kunge aine chigadzirwa (kudzidza, kuvhura, kukanzura nekukurumidza, nezvimwewo)
1 Bank chikwereti kupihwa
2 Ivo vanopa kusvika makumi matatu ezviuru euros
3 Investment uye pension chikwereti
4 Zvakanakira kushandisa kune iyi mari
5 Njodzi dzeaya mashandiro
Bank chikwereti kupihwa
Parizvino kupihwa kwebhangi hakusi kwakakura zvakanyanya sekumwe kurovedza muviri. Asi zvirinani ivo vanounganidza zvakakwana zvirevo zvekuzvishandisa pane imwe nguva muhupenyu hwedu. Nehunhu hwakasiyana kwazvo kubva kune imwe kuenda kune imwe sezvo uchizokwanisa kuona pazasi sezvo yega yega inochengeta imwe akasiyana kwazvo mabhizimusi zvevamwe. Chero zvazvingaitika, ichi chakanyanya kupihwa chipo icho chiripo kuitira kuti vashoma uye vepakati varimari vagone kuchengetedza mari yavo pamamiriro asingatarisirwe.
Nekuti zvazviri ndezvekuti kwete kurasikirwa nemari mumisika dzakasiyana dzemari. Hazvishamise kuti ndicho chinangwa chezvigadzirwa izvi zvemari yakazvimiririra, uko inochengetedza chaiwo mamiriro muchibvumirano chayo chaunofanira kuziva kubva zvino zvichienda mberi. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva kune yemari maonero. Chero zvazvingaitika, hazvikurudzirwe kuti utore chero cheizvi zvikwereti pamari yavo yepamusoro sezvo ichawedzera zvakanyanya chikamu chako chechikwereti.
Ivo vanopa kusvika makumi matatu ezviuru euros
Chikwereti cheCredifondo mutsetse wechikwereti kune vatengi vemari vanotengeswa neIbercaja. Yakagadzirirwa kupa mari varidzi veizvi zvigadzirwa uye izvo ne mutero zvikonzero kana zvimwe zvinodiwa, havadi kudzorera mari yavo. Imwe yemipiro yayo yakakosha ndeyekuti inokutendera kuti ugare mumari, asi uine huwandu. Nemitero yemitero yakataurwa nehukuru seyako muridzi. Pasi pehuwandu hwemakumi matanhatu ezviuru euros uye nguva yekubhadhara yemakore anosvika masere.
BBVA, kune rimwe divi, inopa maakaundi mahombe nezvikwereti zvinoshanduka zvine mazwi ari pakati pemwedzi mitanhatu uye kusvika pamakore matatu anozivikanwa nekupa rubatso rubatso rwezvikamu. Kuti utore mukana weakanaka mamiriro emusika wekutengesa. Ivo vanoisa chiyero chemubereko pazasi pe5% uye vanobvisirwa kuvhura uye kwekutanga kudzimisa mari. Mune chii chiri chakasiyana chimiro kubva kune chakasara, sezvo iri iri tambo yechikwereti nechibvumirano chemasheya. Musiyano wakakura zvine chekuita nezvimwe zvikwereti zvekudyara.
Investment uye pension chikwereti
Chimwe chiitiko chakasiyana icho chakaratidzwa neBankia kuburikidza neInvestment uye Pension Loan yayo. Iyo inoshanda kune mari mipiro kuzvirongwa zvepenjeni uye kunyangwe kuwana zvakanakisa mutero zvakanakira mipiro yakaitwa. Nekuda kweiyi zano, iwe unokwanisa kuwana mari yemutero yakanangana nekugutsa chinodikanwa chevabati vasingade kuvhara mashandiro avo. Sekukosha kwakawedzerwa, inofungisisa mukana wekusarudza yakatarwa kana inoshanduka chiyero chemari. Kupa kushomeka kushoma mukupa iyi yakasarudzika mhando yemari inopihwa nemabhengi ekutengesa nzira.
Kunze kwezvakataurwa zvebhengi, iwe unogona kugara uchienda kuzvikwereti zvinozivikanwa se inosarudzwa. Ndokureva, avo vanofunga zvirinani zvibvumirano mamiriro anoenderana neakanakisa chimiro iwe yaunopa sebhangi mutengi. Nekuderedzwa kweinenge imwechete muzana poindi mukushandiswa kwemari yemubereko uye kuregererwa kwemhando dzese dzemakomisheni uye dzimwe nguva yemari yevatungamiriri nekuchengetedza. Kusvika padanho rekuti ivo vanozove zvishoma zvinonakidza kudzivirira zvaunofarira. Zvese muhukama hwako nemisika yemari uye mukudzorera kwechikwereti pachako.
Zvakanakira kushandisa kune iyi mari
Ehe, zvikwereti zvekudyara zvinogona kukubatsira kuti ubude mumatambudziko anopfuura rimwe chete muzvikwereti zvakagadzirwa uye kwete chete mune izvo zvakabatana nemusika wemasheya. Izvi ndezve shure kwezvimwe zvezvinangwa zvikuru zvekirasi ino yezvikwereti zvatiri kutaura nezvazvo. Kunyangwe iwe uchifanira kuongorora kana iko kuvhiya kuchizobatsira kubva ikozvino. Nekuti zvinopesana zvinogona kuitika. Chero zvazvingaitika, tiri kuzokuratidza mamwe mabhenefiti ayo kudiwa kweizvi zvigadzirwa zvebhangi zvinogona kukuunzira. Dzimwe dzadzo dzinogona kukukodzera iwe izvozvi.
Navo vanotakura mwero wemari yakawandisa, asi zvinopesana inochengetwa neiyo imwechete yekumakirinari margins senge mune zvimwe zvikwereti zvemari kune vamwe vanhu. Ivo oscillate mune fringe inoenda 6% kusvika 10% anenge.
Iwo anogona kuumbwa mune mhinduro mhinduro nguva yakaipa pamberi pekudyara kwako uye panosvika nguva yausingakwanise kutengesa zvikamu zvako kana kutora chikamu. Pakati pezvimwe zvikonzero nekuti ivo parizvino vakaremara zvakanyanya.
Ivo zvakare vane hunyoro hwekuti papi yako tip ye kushomeka muaccount yazvino Haisi iyo yaunoda uye iwe unogona kuzviona iwe mune yakaoma maitiro ekutengesa ako ekudyara. Kazhinji mumamiriro ekusagadzikana mumisika yezvemari uye mhedzisiro yakanyanya ndeyekuti iwe unogona kuzviona wakanyura mukuita kwakashata pamusika wemasheya kana wakatorwa kubva kune zvimwe zvigadzirwa zvemari.
Izvo zvinoratidzwawo zve tenderera kutenderera nguva mukudyara uye kunyanya mumusika wemasheya. Saka kuti iwe usatengese yako share pamitengo iyo inogona kuseka chaizvo uye icho chinhu icho pane imwe nguva muhupenyu hwedu chakaitika zvinosuruvarisa.
Njodzi dzeaya mashandiro
Pane kupokana, aya marudzi ekufambisa anewo njodzi dzausingafanire kukanganwa. Kunyanya nekuti ivo vanozobatanidza mari isingakoshe zvakanyanya, zvinoenderana nemari inodiwa. Iwe unofanirwa kuongorora kuti kuvhiya kwacho kunogona here uwane purofiti uye nechengetedzo yakadii. Kwete zvisina maturo, iwe unogona kukumbira inosvika zviuru zana zveeuro nekuda kwezvinangwa izvi. Neichi chikonzero, iwe unofanirwa kuongorora mamiriro ari mukudzoka kwako uye kana zviriko kana kwete zvakakodzera kukwereta kune dambudziko rauinaro muzvikwereti. Mukupedzisira, zvinogona kuve zvinobatsira iwe kubhadhara izvo zvawakavhura mumisika yemari.
Kune rimwe divi, rudzi urwu rwechikwereti runogona kukwidza chikwereti chako kumatanho ane njodzi zvakanyanya kune zvako zvaunofarira. Chero zvazvingaitika, pane mutemo wegoridhe waunofanirwa kugara uchishandisa uye ndizvo usamboshandisa zvisina kunaka rudzi urwu rwemari. Nekuti mhedzisiro yacho inogona kuve inopesana neizvo iwe zvauri kunyatsotsvaga neyako kuda. Imwe yenjodzi dzayo inonyanya kukosha ndeyekuti mari yaunoshandisa nezvikwereti izvi inogona kunge yakakura kudarika iyo bhenefiti yauchazomhan'ara nezvekudyara. Zvichengetedze mupfungwa kubva zvino zvichienda mberi kuti udzivise chero rudzi rwezvishamiso zvisina kunaka.
Chekupedzisira, unofanirwa kuongorora kuti unonyatsoda here kuita oparesheni iyi. Iwe unofanirwa kuedza kutsvaga dzimwe nzira dzinogutsa. Semuenzaniso, kuda mari iyi kuburikidza nehama dzako dzaunovimba kana kukumbira chikwereti pakati pevanhu. Hazvishamise kuti pane mari yakawanda yaunogona kusevha kuburikidza neaya marongero ekupa mari mune yako yekutarisa account. Kana kungo tarisa hupfumi hwako kumatemu akareba kwaunogona kudzorera kukosha kwavo kwekutanga nekufamba kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zvikwereti zvekudzivirira mari yakaipa